PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-06-17 - USUTHU LULWELA UKUKHONKA EMUVA
USUTHU LULWELA UKUKHONKA EMUVA
Ilanga langeSonto - 2018-06-17 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA NDLOVU SENZO SOKHELA
AMAZULU FC asezinhlelweni zokuqinisa isikwati sawo ngokugcina uthembela Sikhakhane oyisitobha se-orlando Pirates aphinde asayinise usibusiso Khumalo ( osesithombeni esincane) osanda kukhonjwa indlela yikaizer Chiefs naye odlala emuva. Ichiefs iqede ukuqagela ngekusasa labadlali abebeyibambe kuyona imemezela ukuthi ichitha uwilliam Twala, ukeagan Buchanan, u-edmore Chirambadare, ukhumalo notsepo Masilela. U-emmanuel Letlotlo okuvela ukuthi ubesanda kufaka isicelo sokukhululwa, ihlela ukumubolekisa.
Leli phephandaba lihoshe ngemithombo yalo ukuthi ucavin Johnson ololonga usuthu, ufuna uthuli ukhumalo abake basebenza naye kwisupersport United. Kuthiwa ufuna azolekelelana nosibusiso Mabiliso osemncane odlala ohlangothini lwesokunxele emuva. Kuthiwa ufuna lo mdlali nje, yingoba use-
Ukhonjwe indlela usimphiwe Mtsweni ohlulekile wukwenza into abeyiqashelwe.
Leli phephandaba lithole nokuthi usuthu lufuna ukumgcina usikhakhane obelumboleke kwipirates ngesizini edlule.
Udaba lukasikhakhane luqinisekiswe nguqedi Dlamini oyimenenja LIBHEKISE erussia engakagculiseki ngesikwati sakhe udkt Irvin “Iron Duke” Khoza ongusihlalo we-orlando Pirates.
Ibucs ijabulise abalandeli bayo imemezela uhlu lwabadlali ebasayinisile.
Phakathi kwabadlali ebasayinisile kungabalwa kubona ubrilliant Khuzwayo, uvincent Pule, uben Motshwari, u-asavela Mbekile, ulinda Mntambo, upaseka Mako, u-abel Mabaso, umeshack Maphangule nokuda-kwashe Mahachi.
Kulindeleke ukuba ibucs ichithe abadlali bayo abebengumgogodla okungabalwa kubona uthabo Matlaba, umpho Makola, u-ayanda Gcaba osekuqinisekisiwe ukuthi uyahamba, uthamsanqa Gabuza, umark van Heerden, unkosinathi Mthiyane ukukha nje phezulu.
Ukhoza ngaphambi kokuba alibhekise erussia yosuthu oveze ukuthi nakanjani lesi sitobha esidabuka ondini sizokube siyingxenye yesikwati sale kilabhu esizoqala ukujima kusasa ngomsombuluko.
Leli phephandaba lishayela ujohnson ngodaba lukakhumalo, uvumile ukuthi uyamfuna lo mdlali.
“Yiqiniso ukuthi ngiyamfuna emuva kokuzwa ukuthi ichiefs imkhululile. Ukhumalo ngimazi esemncane, ukhulile manje futhi ngike ngasebenza naye kwisupersport, ngiyakwazi ukumsebenzisa ngendlela.
"Inkinga esibhekene nayo nje wukuthi laba badlali abachithwa yichiefs, yipirates nemamelodi Sundowns abafuni ukwehlisa imiholo, bavele baziqhenye ngathi ekubeni bazi ukuthi singamakilabhu amancane.
“Umuntu ufike ahlale amasizini amathathu engadlali kula makilabhu amakhulu bese ehlulwa wubala nje ukuzehlisa, ehlise umholo ukuze athole elinye ithuba lokudlala.
"Yiyona inkinga esibhekene nayo lena okuyiyona eyenza ukuba sigcine siphoqelekile ukuzisayinisela abafana abasebancane.
"Vele-ke mina nginabo abafana abancane ebengibabolekisile engisazobabheka,” kusho ujohnson.
Udlamini uthe: “Iqembu liyaqala ukujima ngomsombuluko (kusasa). Silindeleke ukuba siqale nosikhakhane njengoba sisezinhlelweni zokumugcina.” ngeledlu-le, njengoba kunomqhude-lwano wendebe yomhlaba oqale ngolwesine, utshele leli phephandaba ukuthi akakagculiseki ngesikwati sakhe, ubona sisashoda.
“Ngesizini edlule sibe nenkinga kakhulu emuva singenelwa ngamagoli amaningi. Uma ubheka abadlali esibasayinisile bakhonze ukuhlasela kakhulu kanti kumqoka ukuvala emuva. Phela yilapho okufanele sizame ukuqinisa khona.
"Sidinga isiqongqwane, umuntu ozomisa udonga lwethu lwasemuva luqine ngqi.
“Kukhona engiphezu kwakho wukuthi akukalungi, kuzokuthi kungahlangana bese nginazisa. Phela kuyasebenzeka noma usemazweni angaphandle, ubu- chwepheshe besimanje busivumela ukuba sisebenze noma ngabe sikuphi,” kusho ukhoza.
Limubuza leli phephandaba ukuthi ngabe kukhona yini okuhlanganayo ngothulani “Tyson” Hlatshwayo webidvest Wits, okuthiwa ufunwa yibucs, uthe:
“Ngeke ngikwazi ukukhuluma ngabadlali bamanye amakilabhu, kufanele ngiwanike inhlonipho njengoba nawo ekwenza lokho.
"Isitobha siyasifuna futhi kukhona esizosithola esinohlonze, abalandeli bethu mabalinde.
"Ngasho ukuthi kukhona okuzayo ngabadlali abasha, nangempela kwenzeka lokho, ngakho-ke namanje abalandeli mabalinde kukhona okuseza engethemba ukuthi uma sekuhlangene kahle kuzobajabulisa.”
Sidinga isiqongqwane, umuntu ozomisa udonga lwethu lwasemuva...
ISITHOMBE NGABE: GALLO IMAGES NOMFANAFUTHI
UTHEMBELA Sikhakhane ongumdlali wasemuva we-orlando Pirates obebolekiswe kumazulu FC usazoqhubeka nokuhlala osuthwini nakule sizini ezoqala.